Aspire: Ny sehatra ara-barotra Influencer ho an'ny marika Shopify avo lenta | Martech Zone
Raha toa ianao ka mazoto mamaky ny Martech Zone, fantatrao fa manana fihetseham-po mifangaro aho marketing marketing. Ny fijeriko ny marketing influencer dia tsy hoe tsy mandeha izany… fa mila ampiharina sy arahina tsara. Misy antony vitsivitsy:
Fitondran-tena amin'ny fividianana - Ny influencers dia mety hanorina fahatsiarovan-tena amin'ny marika, saingy tsy voatery handresy lahatra ny mpitsidika iray hanao fividianana marina. Toe-javatra sarotra izany… izay mety tsy onitra araka ny tokony ho izy ny mpanentana na ny fivarotana vokatra dia tsy misy orinasa maniry hampiasa vola bebe kokoa.
vahana – Rehefa niara-niasa tamin'ny marika taloha aho, dia fantatro fa mila volana maromaro indraindray mba hanafanana ny fiarahamoniko amin'ny vahaolana. Rehefa tsy mahita vokatra eo no ho eo ny orinasa dia mandeha matetika izy ireo. Nahazo vokatra tsara aho tamin'ireo marika niara-niasa tamiko nandritra ny herintaona na mihoatra… fa ireo izay te hanao andrana 1 fotsiny dia tsy nahomby.
Tracking – Isaky ny dia ny mpanjifa, dia misy ny fiafarana samihafa… ary tsy izy rehetra ireo no azo arahana miverina amin'ny asako amin'ny maha-mpanentana ahy. Mety hilaza marika aho amin'ny famelabelarana na podcast ary tsy hampiasa ny URL mahazatra, code fihenam-bidy, na hiditra amin'ny toerana nandrenesany momba ilay marika ny mpihaino ahy. Ho an'ny orinasa dia toa tsy nanao fampisehoana aho. Ary, mahasorena ahy ny tsy nahazoako crédit.
Ny ecommerce dia indostria tsy mampino miasa satria ny dia ho an'ny vokatra an-tserasera dia mazàna dia tena madio. Marina izany amin'ny marketing influencer amin'ny ecommerce ihany koa. Izany no mahatonga ny YouTubers mahazo vola an-tapitrisany isan-taona amin'ny fahafaha-manao marketing influencer… manary rohy ao amin'ny famaritana ny seho izy ireo ary an'arivony amin'ireo mpanaraka azy no afaka mampiditra ilay vokatra ao anaty sarety. Miaraka amin'ny tsindrim-peo sy ny fiovam-po rehetra azo jerena, na ny marika na ny influencer dia faly miara-miasa amin'ny tsirairay mba handrisika ny fanentanana sy ny varotra bebe kokoa.
Ny areti-mifindra dia nanetsika ny ankamaroan'ny fiainantsika an-tserasera, manomboka amin'ny fomba ifandraisantsika amin'ny fomba fiantsenantsika. Raha ny marina, IBM vao haingana no nitatitra fa ny areti-mifindra dia nanafaingana ny fiovan'ny e-varotra amin'ny ankapobeny 5 taona.
Ankehitriny, ireo vondrom-piarahamonina nomerika no mifehy ny tontolon'ny varotra sy ny marika dia manomboka mahatsapa ny fitomboan'ny hasarobidin'ny fampiasam-bola amin'ny influencers — ireo olo-malaza madinika amin'ny haino aman-jery sosialy izay nahazo ny fitokisan'ny mpihaino azy sy ny hery hanovana ny fomba fijeriny sy ny fanapahan-kevitry ny fividianana.
Nahoana ny marketing marketing?
Misy tombony lehibe amin'ny fiaraha-miasa amin'ny influencers sy ny fananganana masoivoho marika:
Fankatoavana tena izy – Rehefa tena tia marika ny masoivoho iray dia hamoaka im-betsaka momba an'io marika io izy ireo — indraindray tsy ho lahatsoratra #sponsored — manome porofo ara-tsosialy.
Mpijery samihafa – Ny ambasadaoro tsirairay dia manana fiantraikany eo amin'ny fiaraha-monina misy azy. Izy ireo dia misolo tena ny mpanjifa kendren'ny marika tsirairay ary miresaka momba ny marika amin'ny fomba azo ifandraisana.
Content Production – Satria mampivelatra ny atiny manokana ny influencers, azonao atao ny mampitombo ny fivoaran'ny atiny cross-channel araka izay irinao… mazava ho azy fa mifantoka amin'ny influencers izay maneho ny marikao indrindra.
Event Management - Efa mampiasa vola be amin'ny hetsika sy fampielezam-peo mivantana ny influencers, manome fahafahana miavaka sy akaiky hanehoana ny marikao amin'ny mpihaino azy.
Vidiny-Isaka-Fividianana ambany kokoa - Ny masoivohon'ny marika dia ahafahan'ny marika mahazo vola bebe kokoa amin'ny vidiny ambany, satria ny marika dia afaka manidy ny sarany miaraka amin'ireo ambasadaoro mialoha ho takalon'ny fiaraha-miasa maharitra.
fanavahana - Matetika ny masoivohon'ny marika dia manaiky ny ho irery amin'ny marika iray ao anatin'io indostria io, mamela ny marika hifehy ny habaka doka amin'ny sakafony.
Aspire: Mihaona amin'ny Ecommerce ny Influencer Marketing
Aspire dia sehatra marketing influencer natsangana ho an'ny ecommerce. Ny sehatra dia manome:
Influencer Discovery - ny fahafahana mikaroka sy mifandray amin'ny mpikatroka 6 tapitrisa mahery, mpankafy marika, manam-pahaizana momba ny indostria ary maro hafa amin'ny fipihana bokotra iray.
Fifandraisan'ny fifandraisana - mitantana amim-pahombiazana ny fampielezan-kevitry ny influencer, programam-pifandraisana, famafazana vokatra, sy ny maro hafa - tsy misy fetra.
Manao ho azy ny fandefasana & fanaraha-maso - mandefa ny vokatra tadiaviny ary mizara fampahalalana momba ny fanaraha-maso mihitsy aza - esorinao eny an-tananao ny fizotran'ny manual rehetra.
Promotions - Mamorona kaody promo Shopify tokana sy rohy mifandray ho an'ny influencer rehetra, tsy mila miala amin'ny lampihazo mihitsy.
ROI azo refesina - refeso ny fiverenana amin'ny programa influencer anao amin'ny kitiho, fampiasana code promo, na mahatratra mihitsy aza. Lazao ny tantara feno momba ny fomba nitondran'ny influencers fitomboana fohy sy maharitra.
Content Creation – Mitondrà fikitihana olona amin'ny fantsona marketing anao miaraka amin'ny votoaty influencer izay haingana mamokatra, tsy lafo ary isan-karazany. Avy eo dia amporisiho ny doka mba hamoronana buzz bebe kokoa.
Shopify fampidirana - Fampidirana Shopify an'ny Aspire ho an'ny traikefa namboarina azonao alaina sy mihazakazaka ao anatin'ny minitra, ao anatin'izany ny fahafahana mandefa sy manara-maso ny vokatra na fampiroboroboana.
Mamandrika Demo Aspire
Tags: marika ambasaderavidiny isaky ny fahazoanamarketing marketingplatform marketing marketingpaikady marketing influencerfanaraha-maso ny marketing influencerFitantanana fifandraisana misy fiantraikanyfanaraha-maso influencerkaody promoshopifyintegration shopify